Fiatrehana ny fidiran’ny mpianatra Efitranon-tsekoly vaovao 606 no naorina
Seces Tana Mila ampitomboina ny famatsiam-bolan’ny oniversite
Ny Seces Antananarivo dia nanao fitakiana miisa 7 ny volana martsa sy aprily, hoy ny filohan’ity sendikan’ny mpampianatra mpikaroka ity, ny Pr Sammy Grégoire Ravelonirina.
Fanadinam-panjakana Miisa 8.577 ireo mpiadina hiatrika ny BEP
Hotanterahina manomboka anio alatsinainy 16 septambra manerana ny Nosy ny fanadinam-panjakana “Brevet d’étude Profesionnelle” na ny BEP haharitra telo andro.
Fanadinana BEPC Histo-Geo, Matematika, Fizika no tena atahoran’ny mpiadina
Nihena 1,74 % ny tahan’ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana BEPC manomboka anio ho an’ny fari-piadidiam-pampianaran’Antananarivo Renivohitra.
Voka-panadinana CEPE niha ratsy Hanao fanadihadiana ny Cisco Antananarivo Renivohitra
Nihena 6 % raha oharina tamin’ny taon-dasa ireo mpianatra afa-panadinana CEPE teo anivon’ny fari-piadidiam-pampianaran’Antananarivo renivohitra.
Fanadinana CEPE Tsara ny vokatra ho an’ny ZAP Ambavahaditokana
Namoaka ny valim-panadinana CEPE ny ZAP enyAmbavahaditokana Itaosy Atsimondrano ny sabotsy maraina teo teto amin’ny Faritra Analamanga.
Olan’ny fanabeazana Ankizy 5 tapitrisa tsy mianatra intsony…
Mahatratra 5 tapitrisa hatreto ny isan’ireo ankizy mpianatra nitsoaka an-daharana an-tsekoly manerana ny Nosy. Ireo mpianatra any ambanivohitra no tena voakasik’izany noho ny halaviran’ny toeram-pianarana sy ny tsy fisian’ny sakafo hohanina.
minisiteran’ny fanabeazam-pirenena manamboatra efitranon-tsekoly vaovao raha araka ny fanadihadiana natao. Manodidina ny 1.000 eo ho eo izany raha araka ny fanazavan-dRamatoa Bakolinirina Fanja Hortensia,
Miezaka hatrany isan-taona ny tale miandraikitra ny fotodrafitrasa eo anivon’ity minisitera iray ity ka ho an’ny taona 2017, ohatra, dia efitranon-tsekoly miisa 606 no efa vita hatramin’ny volana jona lasa teo. Ny faritra Avaradrano no tena nahazo betsaka. Ankoatra izay, efitranon-tsekoly miisa 452 ankehitriny no efa hasiam-panarenana toy ireo nanana varavarankely nirodana. Tao koa ireo efitranon-tsekoly miisa 481 nianjera vokatry ny fandalovan’ny rivodoza Enawo farany teo, asa vao manomboka mandeha ka ny faritra SAVA sy Analanjirofo no tena voakasika. Nomarihin-dRamatoa Bakolinirina Fanja Hortensia moa fa miankina amin’ilay “carte scolaire” hatrany no hahafahan’izy ireo mampitombo ny efitranon-tsekoly any amin’ny faritra tsirairay avy. Io ihany no hahafahana mamantatra fa maro ankizy mpianatra ao amin’ny fokontany iray nefa zara raha misy ny efitranon-tsekoly handraisana azy ireo. Omaly no niditra tamim-pomba ofisialy ny mpianatra rehetra manerana ny Nosy. Na izany aza anefa dia nofoanana ny fidiran’ny mpianatra amim-pomba ofisialy noho ny fisian’ilay aretina pesta izay voalaza fa efa namono olona 24 hatreto manerana ny Nosy.